Taurus ee Zodiac qadiimiga - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Taurus waa sawirka dibi daran oo geeso xoog badan leh. Horoscope-ka maanta, qof kasta oo dhasha inta u dhaxaysa Abriil 21 iyo May 21 waa Taurus. In this turjumaadda horoscope casriga ah ee zodiac xiddigiska, aad raacdo talada horoscope ee Taurus si aad u hesho jacayl, nasiib wacan, Xoolo, caafimaadka, iyo aragtida shakhsiyaddaada.
Laakin halkee buu dibigu ka yimid? Waxa loola jeedaa?
Zodiac-kii hore, Taurus wuxuu ahaa sagaalaad ee laba iyo tobanka xiddigood ee xiddigiska kuwaas oo wadajir u sameeyay sheeko weyn. Virgo ilaa Sagittarius wuxuu sameeyay unug xiddigiyayaal ah oo ku saabsan Bixiyaha Wayn iyo iskahorimaadka dhimanaya ee uu la leeyahay Cadawgiisa. Capricorn ilaa Aries waxay samaysteen unug kale oo diiradda saaraya shaqada uu inoogu hayo Bixiyahaan. Taurus waxa uu furay cutubka saddexaad iyo kan ugu dambeeya ee xiddigiska isagoo diiradda saaraya Soo noqoshada Bixiyaha iyo guushiisa oo dhammaystiran. Cutubkani waxa uu ku furaa dibi waxa aanu ku xidhaa libaax (Leo) markaa waxay khusaysaa awoodda iyo maamulka.
Zodiac-kii hore, Taurus wuxuu ahaa dadka oo dhan tan iyo markii ay saadaalisay dhacdooyinka saameeya qof kasta. Markaa xitaa haddii aadan ahayn Taurus ee dareenka horoscope-ka casriga ah, sheekadii xiddigiska ee qadiimiga ah ee ku dhexjirtay xiddigaha Taurus ayaa mudan in la fahmo.
Kooxda Taurus ee Xiddigaha
Taurus waa xiddigo ka kooban xiddigo samaysa dibi leh geeso caan ah. Halkan waxaa ah xiddigaha Taurus. Ma ku arki kartaa wax u eg dibi geeso leh sawirkan?
Halkan waxaa ah sawirka National Juquraafi ee Taurus oo ay weheliyaan sawirada kale ee xiddigiska ee Zodiac. Dibbigu miyuu soo galay mid ka cad?
Taurus ee National Geographic
U fiirso xiddigaha Taurus ee ku xiran khadadka. Miyaad ka sii fiicnaan kartaa dibiga geeso leh? Halkii ay u ekaan lahayd xaraf cosmic K ah.
Kooxda Taurus oo leh xiddigo ku xiran khadadka
Laakiin calaamadani waxay dib u noqotaa inta aan ognahay taariikhda aadanaha. Halkan waxaa ah zodiac ee Macbadka Dendera ee Masar, in ka badan 2000 oo sano, oo Taurus ku wareegsanaa casaan.
Taurus ee Dendera Zodiac
Sida xiddigihii hore ee zodiac, sawirka Taurus ee Bull kama muuqanayo kooxda lafteeda. Ma aha mid ka dhalanaysa xiddigaha. Balse, fikradda oo ka mid ah Dibida Dallacaadda ayaa ugu horeyn yimid. Xiddiggii ugu horreeyay ayaa markaas fikraddan ku dul-saaray xiddigaha. Laakiin waa maxay sababtu? Maxay ula jeedeen dadkii hore?
Sawirka xiddigiska ee Taurus wuxuu muujinayaa Bull oo leh geeso caan ah, madax hoos loo dhigay, lacag bixin. Waxay la mid tahay in dibiga lagu muujiyay cadho aad u daran – diyaar u ah inuu qof kasta ku jiido jidkiisa, isagoo hore ugu sii socda tamar degdeg ah oo aan xuduud lahayn.
Taurus sida sawirka xiddigiska – oo Pleiades ku wareegsan
Ku wareegsan casaanka waa kooxda xiddigaha loo yaqaan Dood-wadaag (ama Seven Sisters) oo ku yaal bartamaha qoorta Taurus. Tixraaca ugu horreeya ee tooska ah ee Pleiades wuxuu ka yimid kitaabka Job ee Kitaabka Quduuska ah. Ayuub noolaa waqti ku dhow Ibraahim, qiyaastii 4000 oo sano ka hor. Halkaa waxaan ku akhrinay:
Isagu waa Abuuraha orso iyo Orion, ka Dood-wadaag iyo xiddigaha koonfureed.
Ayuub 9: 9
Xiddigaha, oo ay ku jiraan Pleiades (iyo sidoo kale Taurus) waxaa sameeyay Abuuraha laftiisa. Asal ahaan zodiac wuxuu ahaa sheekadiisa oo la siiyay dadkii hore ka hor intaan la qorin waxyiga. Sheekadan waxa udub dhexaad u ahayd soo socota (Virgo – oo ka yimid bikrad) ee Isa al Masih NNKH. Taurus wuxuu sii wadaa sheekada, laakiin wuxuu ballaariyaa baaxadda. Geesaha Taurus iyo saadaasha Zabur ayaa ah furayaasha fahamka. Masihku wuxuu lahaa Waxay ka yimaadeen farcankii Daa’uud (Cuqaal ‘Masih’ = ‘Masiix’ = ‘Masiix’). Sawirada tilmaamaya Masih soo socda waxa ka mid ahaa kan ‘geeska’.
Taurus iyo Geeska
Halkaas waxaan ka dhigi doonaa in gees Daa’uud u soo baxo,
Waxaan laambad u diyaariyey kii aan subkaday.
Laakiinse geeskayga waxaad u sarraysiisay sida geeska gisiga
Sabuurradii 92: 10
‘geesku’ wuxuu u taagnaa awood iyo awood. The Mid la subkay (Masih) wuxuu ahaa geeskii Daa’uud. Imaatinkiisii ​​ugu horreeyay ma uusan qaban geeskiisa sababtoo ah isaga u yimid sidii Addoon. Laakin ka fiirsada siduu noqon doono imaatinkiisa Labaad.
Quruumahow, u soo dhowaada si aad wax u maqashaan, oo dadyowgow, i dhegaysta, dhulka iyo waxa ka buuxa iyo dunida iyo waxyaalaha ka soo baxa oo dhammu ha maqleen. 2 Waayo, Rabbigu wuxuu u cadhaysan yahay quruumaha oo dhan, oo wuxuuna u dhirifsan yahay ciidammadooda oo dhan. Dhammaantood wuu wada baabbi’iyey, oo wuxuu iyaga u gudbiyey in la laayo. 3 Oo weliba kuwoodii la laayayna waa la xoori doonaa, oo qudhmuunkooduna wuxuu ka soo uri doonaa bakhtigooda, oo buurahana dhiiggoodaa ka soo qulquli doona. 4 Oo ciidanka samada oo dhammuna wuu wada idlaan doonaa, oo samooyinka oo dhanna waa la wada duudduubi doonaa sida qorniin duudduuban oo kale, oo ciidankooda oo dhammuna hoos buu u soo daadan doonaa sida caleenu geed canab ah uga dhacdo iyo sida xabbad berde ahu geed berde ah uga soo dhacdo. 5 Waayo, seeftaydu samooyinkay ka dheregtay oo bal eega, waxay ku soo degi doontaa Edom iyo dadkii aan habaaray inay xukunto. 6 Waayo, seeftii Rabbiga dhiig baa ka buuxsamay, oo waxay ka dheregtay baruur, iyo dhiig baraar iyo orgi, iyo baruurta kelyaha ee wananka, waayo, Rabbigu wuxuu qurbaan ku samaynayaa Bosraah, oo dalka Edomna layn weyn. 7 Oo lo’gisiguna iyaguu la dhici doonaa, oo dibida yaryaruna dibida waaweyn bay la dhici doonaan, oo dalkooduna dhiig buu ka wabxi doonaa oo ciiddooduna baruur bay ka dhergi doontaa. 8 Waayo, taasu waa maalinta aarsashada Rabbiga, iyo sannaddii abaalgudka dacwaddii Siyoon loo qabay.
Ishacyaah 34: 1-8
Kala dirida xiddiguhu waa sida Isa al Masih uu yidhi Calaamada soo laabashadiisa. Nebi Ishacyaah (700 BC) halkan waxa uu saadaaliyay isla dhacdo la mid ah. Markaa waxa ay qeexaysaa saacada uu Masihku imanayo si uu dunida ugu xukumo xaqnimada – saacada xukunku imanayo. Waxa samada lagu sawiray Taurus, oo waxa ay ku qoran tahay kitaabka. Wuxuu imanayaa isagoo xaakin ah.
Horoscope Taurus ee Qoraallada
Qoraallada nebigu waxay calaamad u yihiin Taurus ‘horo’ sida tan.
Oo haddana waxaan arkay malaa’ig kale oo samada dhex duulaysa iyadoo wadata injiil daa’imis ah inay u naadiso kuwa dhulka deggan iyo quruun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta iyo dad kasta; 7 iyadoo cod weyn ku leh, Ilaah ka cabsada, oo isaga ammaana, waayo, saacaddii xukunkiisu way timid. Oo caabuda kii sameeyey samada iyo dhulka iyo badda iyo ilaha biyaha ah.
Muujintii 14: 6-7
Erayga Giriigga ee saacadda xukunka waa yasido, la mid ah xididka ‘horoscope’. Akhriska nebiyada ayaa sheegay in tan saacad iman doona oo waa saacadda taas oo calaamad u ah Taurus ee horoscope hore ee xiddigiska.
Akhriska Horoscope-kaaga Taurus
Adiga iyo anigu waxaan codsan karnaa akhrinta horoscope Taurus maanta.
Taurus wuxuu kuu sheegayaa in dhamaadka uu la imaan doono bag weyn oo dhammaan nalalka samadu ay dami doonaan. Xataa ma jiri doonaan meerayaal agagaarka ah oo la jaanqaadi kara xiddig kasta. Markaa waxa ugu fiican inaad wakhtigaaga si fiican uga faa’idaysato inta ay wali nalku shidantahay. Meel wanaagsan oo laga bilaabo waa ka shaqaynta is-hoosaysiintaada, waayo, Ilaah waa ka soo horjeedaa kuwa kibra, laakiin kuwa is-hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa. Si kale haddii loo dhigo, ma jiro wax waafaqsan isaga iyo kibirka in aad. Codkeedana waxaad dooni Saacaddaas Naxariis badan. Sifada uu saacaddaas ku tijaabin doono ayaa ah inaad jeceshahay iyo in kale. Sidee ku ogaan kartaa inaad isaga jeceshahay? Siduu yidhi, Haddaad amarradiisa xajisaan, waad jeceshihiin isaga. Ugu yaraan, ilaalinta amarradiisa waxay ka dhigan tahay ogaanshaha iyaga iyo samayntooda.
In la is jeclaado waa sifo kale oo uu aad u qiimeeyo. Dabcan fikradiisa ku saabsan waxa jacaylku waa ka duwanaan karaa kaaga markaa waxaad rabi doontaa inaad ogaato waxa uu leeyahay jacaylka dhabta ah. Fikraddiisa jacaylku waxay kuu horseedi doontaa xiriir aad u fog, hadday tahay shaqada, guriga ama jacaylka. Waxa uu aad uga hadlay sida jacaylku kuu dareensiiyo, iyo waxa uu jacaylku kaa dhigayo oo aanad samayn. Waxa uu sheegay in jacaylku yahay mid dulqaad iyo naxariis leh oo aan xaasid lahayn, ma faano, isla markaana aan faanin. Ku celcelinta inaad sifooyinkan noloshaada geliso waxay ku socon doontaa si ay kuugu diyaariso saacadda Taurus. Fikradda kama dambaysta ah, waxa laga yaabaa inay wax u furto si ay u bartaan waxa ‘ injiilka daa’imka ah’ uu yahay kaas oo malaa’igtu ahayd inay ku wacdo quruumaha oo dhan.
Dheeraad ah ee Zodiac iyo qoto dheer galay Taurus
Taurus sawirada xukunka. Gemini ayaa sawiri doona waxa ku dhici doona kuwa xukunkan maraya. Bilawga sheekada Zodiac eeg Virgo.
Soo deji dhammaan cutubyada Zodiac sida buug PDF ah
Si aad u qoto dheer u gasho Sheekada Qoran ee Taurus eeg:
Malaa’igta midigta iyo bidixda joogtaa ma caawiyaan maalinta qiyaame
Maalinta: Al-Humazah & The Masih
Maalinta: At-Taariq, Al-Adiyat & Masih
Maalinta: Al-Qaariah & At-Takathur iyo Masih
Maalinta: Al-Masad & Al-Xadiid iyo Maasix
Maalinta: Al-Inshiqaaq & At-Tur iyo Masiix